Bentley Cadasatre: kala duwanaanshaha Khariidadda Bentley iyo Khariidadda Awoodda - Geofumadas
Bentley Cadasatre: kala duwanaanshaha Bentley Map iyo Power Map
Disember, 2009 cadastre, Geospatial - GIS, Microstation-Bentley
Laga bilaabo Microstation Juqraafiga 2004, mashruuca loo yaqaan XFM ayaa la bilaabay, kaas oo isla qaabkan dgn V8 ah ay ku jiraan awoodaha XML. Ka dib markii 8.9 loo yaqaan 'XM Bentley' joojin Juquraafi oo billaabaya Bentley Map, sigaar cabbitaan oo kala duwan oo ku saabsan xogta, inkastoo isku mid ah macquul ah howlgalka.
Hadda waa wax aan la fahmi karin guuritaanka, taa tan ayaan ka dhigi doonaa faraqa u dhexeeya saddexda barnaamij ee la heli karo ee ku jira khadka, xoojinta kiiskan Cadastre, hab kale oo xiisa leh oo loogu talagalay maaraynta xaafadda.
Bentley Map: Waa nooc buuxa, oo qiimihiisu ka yar yahay $ 1,500 iyada oo shardi ah in loo isticmaalo "sidaas oo kale" waxay u baahan tahay ruqsadda Microstation (in ka badan $ 4,000). Waxay ku habboon tahay kuwa haysta rukhsadaha Microstation iyo waxa kaliya ee ay sameynayaan waa hirgelinta aagga geospatial ama kuwa ka baxayay mashruuc ee qorshaha juqraafi.
Ma aha ujeeddada boostadani in la arko waxa Bentley Map uu sameeyo, taas oo ka mid ah waxyaabaha kale ee abuuri kara PDF 3D iyo xitaa taageeraan daabacadaha 3D, waxaan arki doonaa maalin kale; Halkan waxaad ka arki kartaa in ka badan Bentley Map
Bentley Hotels: Waa la qabsashada Khariidadda Bentley, oo leh shaqooyinkeeda gaarka ah ee loogu talagalay isticmaalka qashinka, qaar laga soo qaatay Sahanka Geopak iyo jaangooyooyin cusub oo isweydaarsi ah oo laga hirgeliyay XM. In ka badan ama ka yar (in ka yar wax ka badan) qalabka ay bixiso ESRI ee kordhinta Falanqeeyaha Sahanka, (Tifatiraha Sahanka, Tifatiraha Cadastral) iyo Cadastral Fabric. Waxay ku kacaysaa wax ka yar $ 2,000 laakiin sida Bentley Map, waxaad u baahan tahay ruqsad Microstation ah.
Waxaa ka mid ah hababka ay leedahay, iyo in aan la iman Bentley Map waa:
Daabacaadda COGO Abuuritaanka xogta
-Ku xir jaantuska
-Dhallin khadka tooska ah ee la soco
-Uxuji jadwal leh jaangooyo
-Si aad u aragto caan aan ahayn
-Isku day inaad wax ku qorato
-Ku xir farriin
-Ku dar-korodh -Shirkadda geeska ah
-Waxbarashada iyo masaafada
-Ku noqo meelo kala duwan
-Ka-hortagida topolojiga shaqada shaqada
-Ka hortagida topolojiga laga soo qaado noodhka
-Ku darista culeyska bukaanka ka soo jeeda geesaha aan la xiriirin
Cabbiraadda Maareynta Dhulka
- Beddelaadda Qalabka
-Fin Fom File
-Waxbarashada Rugta -Waxbarashada qoraallada
-Waxaa ka mid ah sawirro laga soo qaaday meel la qeexay
-Deegashada gawaarida ee meelaha isku midka ah
La shaqeyn karo Taasi kuma jirto Khariidadda Bentley
-Deegashada XML Land Land
-Xulashada XML Land Sababaha cad ee ah xakamaynta fayo-qabka ee macnaheedu ma aha mid ku jira Isku-xirka Dhaqaalaha:
-Dhagacsi qashinka ah
-Waxaa dhamaantood (sida xayndaabka)
-Ka fa'iidaysto kharajka bilaashka ah
Halkan waxaad ka arki kartaa in ka badan Bentley Cadastre
Bentley Power Map: Waa nooc ka mid ah version dhaqaale, sida AutoCAD lahaa lite, farsamada yaabka leh laygu waddaa dhow wax walba oo ka dhigaysa Bentley Map, ka kharash yar $ 1,500 oo aadan u baahnayn liisan sababta oo ah waxay keentaa Microstation ka mid ahaa. Tani waxay u fiican tahay kuwa aan haysan liisanka Microstation waxayna sameyn doonaan markii ugu horeysay ama tiro yar, waxay u shaqeysaa si isku mid ah Awoodda Shacabka.
Waxaa ku jira wax kasta oo Bentley Map keeno, ilaa warpeos waalan in Cadasatre uusan keenin, iyo sida Bentley Map, ma keenayso wax yaabab ah oo Cadastre uu soo bandhigo.
Faa'iidooyinka ay khuseyso ee la xariira Khariidadda Bentley waxay ku socotaa habka loo isticmaalo ruqsadaha:
- Ma socon kartid codsiyada kale Sida aan jeclaan lahaa haddii aan la soconayo liisan caadi ah Microstation, waxaan ahay macquul ahaanshaha injineeriyada sida Geopak, Inroads, naqshad qaabdhismeed (Staad / RAM), naqshadaynta biyaha, dhirta, dhirta iwm.
- Waxay sidoo kale sheeganayaan inaadan fulin karin wax ka badan hal dalab seddexaad ah, inkastoo aanan fahmin xaddidaadkan haddii ay ku saabsan tahay jadwalka lagu abuuray Microstation API ama xoogaa laga soo dejiyey samada saddexaad, in meesha uu Rasuulka ahaa.
- Kadib xakamaynta 3D, inkastoo ay ka mid tahay awoodda 3 Dimuqraadiyada, waxaa la aaminsan yahay in aan animations la samayn karin.
Halkan waxaad ka arki kartaa in badan oo Khariidadda Awoodda.
Degmadu: Fikradda ugu fiican ee loogu talagalay sababaha qiimaha.
Mashruuca Qaran ee Qaran ee Qaran, Bentley Cadastre.
Mashruuc ballaaran oo GIS ka dhigaya mid aan kali ahayn, Bentley Map.
para hirgaliso: Waxay iigu yeeraan XD
Laga soo bilaabo 2011, Bentley Map V8i waxaa ka mid ah Bentley Cadastre iyo Qorshaha Awoodda Khariidadda Qorshaha.
Post Previous" Hore Letter to akhristayaasha aan
Post Next Geophysics: Saadaalinta 2010: Barnaamijka GISNext »